Esi esi esi nri lingonberry maka oyi: ihe kacha mma - Berry - 2020
Esi esi nri lingonberry jam: ntụziaka dị mfe ma mara mma na foto
Lingonberries abụghị mkpụrụ osisi na-ewu ewu, dịka mkpụrụ nke raspberries ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-akụ, ma n'otu oge ahụ, ọ nwere ọtụtụ ihe bara uru, ekele nke na-esi na ya aghọwo ihe a ma ama taa. Ka anyị lelee ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị amasị ma n'otu oge ahụ ntụziaka dị mfe maka nchebe nke mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi.
Nkwadebe nke tomato
Ụdị jam nke a
Ọ dịghị nri
Lingonberry na apple jam
Lingonberry jam na ngwa nri
Ihe ị ga - eme ka ọ ghara ịdị njọ
Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ikpokọta
Ihe ị ga-etinye na tebụl
Banyere uru nke lingonberries
Ruo ogologo oge, lingonberry toro n'ókèala anyị dị ka osisi ọhịa, ma mgbe ọ mụsịrị banyere uru ndị bara uru, ndị mmadụ malitere ịzụlite ya dịka ọdịbendị. Ya mere, ihe dị mma n'iji beri a kwesịrị ịgụnye:
eme ka ọrụ nchebe nke ahụ dị ike;
igbochi ọrịa obi na prostatitis;
mmetụta dị mma n'ahụ akụkụ nke urogenital system;
ọganihu nke oge nhazigharị mgbe ọmụmụ nwa ahụ gasịrị;
normalization nke trastrointestinal tract;
nlekota nke oma nke rheumatism na gout;
mgbake nke ahụ dum (akpan akpan, aka ike, ntutu na iwepu ọrịa dermatological);
ngwọta ngwọta ngwa ngwa;
agha na-aga n'ihu na ikpuru.
Ọ bụghị naanị mkpụrụ osisi, kamakwa akwụkwọ ndị na-emepụta mkpụrụ osisi nwere ike inwe ụdị diuretic, antiseptic na mmetụta antimicrobial n'ahụ mmadụ, na ụfọdụ, extracts na decoctions nke tomato na-eji dị ka choleretic na anti-sclerotic onye ọrụ. Site na nkwadebe kwesịrị ekwesị, mkpụrụ nke osisi ahụ ga-abụ ezigbo ihe eji eme maka ọgwụ maka rheumatism, ụkwara nta, enuresis, gastritis, ọrịa imeju na akụrụ, afọ ọsịsa, cystitis, urolithiasis.
Chọpụta ihe uru na nsogbu nke lingonberries.
Tụkwasị na nke ahụ, iji mkpụrụ osisi tomato na sirop mee ihe mgbe nile nwere ike ime ka ọhụụ dịkwuo mma, na ịmịpụta nke tii na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ gụchaa, kamakwa ọ na-eme ka ahụ dịkwuo njọ na ọrịa.
Ị ma? N'agbanyeghi n'eziokwu na n'oge mbụ a na-agbalị ịkụpụta lingonberries na Russia na narị afọ nke 18, ezigbo ihe ịga nke ọma n'okwu a bịara na ọkara nke abụọ nke narị afọ gara aga.
Iji nwee obi ụtọ zuru ezu na uto na uru nke lingonberry tomato, ha ga-amalite. Enwere ike ime nke a n'ụzọ abụọ: zụrụ ya n'ahịa ma ọ bụ kpọkọta ya n'onwe ya, ma na nke a ma na nke ọzọ, usoro nkwadebe maka ihe ndị eji eme ihe maka jam ga-abụ otu:
niile tomato kwesịrị ịwụnye oyi akwa dị na tray wee jiri nlezianya nyochaa;
epupụta ma ọ bụ naanị mkpụrụ osisi a ghachara (ha ga-adị nro) ga-ewepụ ya;
A na-awụnye ụdị ihe nhọta dị mma n'ime nnukwu efere mmiri ma sachaa ya nke ọma;
Mee ka lingonberries na sieve ma kwe ka mmiri kpoo.
Ugbu a ị nwere isi ihe dị n'aka gị iji mepụta jam site na iji otu ntụziaka ndị a.
Taa, ị nwere ike ịchọta ntụziaka dịgasị iche iche maka stalonberry jam, nke ọ bụla ga-adị mma n'ụzọ nke ya. Anyị ga-amalite nyochaa nhọrọ ndị nwere ike ịhọrọ site na ụzọ dị mma nke ịmepụta ihe tọrọ ụtọ, ma nke kachasị mkpa, ịkwadebe ihe ndị a bara uru.
Sugar - 1280
Mmiri - 210 ml.
Ịhọrọ site na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nanị, ọ bụghị nke a ghaghị ịchọta na-ele anya na-elezi anya na-edozi ahụ, ọ dị ha mkpa ka a saa ha dịka akọwapụtara n'elu.
Ozugbo mkpụrụ osisi ahụ gwọrọ, a na-ebute ha na nnukwu efere ma jupụta na mmiri ọkụ (mmiri ahụ ga-ekpuchi tomato).
Mgbe nkeji ole na ole, a na-agba mmiri ahụ, a na-ewepụkwa ya na lingonberry maka oge: ọ bụ oge iji kwadebe iji dozie syrup.
Iji mee nke a, were pan nke ị na-eme atụmatụ itinye jam, wụsa mmiri ruru ya n'ime ya (210 ml kwa 970 g nke lingonberries) wee weta ya.
Mgbe ahụ, n'ime mmiri mmiri na-ekpo ọkụ, ọ dị mkpa ka ị wụsa shuga ma sie obere ruo mgbe ngwaahịa ahụ na-atọ ụtọ. Ozugbo nke a mere - ụra lingonberries.
A na-etinye tomato na obere okpomọkụ maka nkeji ole na ole mgbe esichaa, ma na-esi ọnwụ 7-10 awa.
Mgbe oge a kapịrị ọnụ, a maliteghachiri nri nke jam ahụ, na-etinye ngwakọta maka minit 20 ọzọ na ọkụ. Enwere ike ịwụnye jam na mpempe akwụkwọ ma tinye ya na capron lids, a ga-etinye ya na friji na ọdịnihu, ma ọ bụ enwere ike ịpịkọta ya na ụzọ a na-emekarị ma zipụ ya ka ọ na-echekwa ya.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ntụziaka maka ịme jam gụnyere mkpụrụ osisi na-esi nri, e nwere nhọrọ iji zere nke a. Dịka ọmụmaatụ, naanị ị nwere ike ịmị mkpụrụ na shuga, gbanye ha ma ọ bụ kpochapụ ha, ma ihe ọ bụla ị họọrọ, ihe ga-esi na ya pụta bụ ihe dị mma ma dị mma. Tụlee otu n'ime ntụziaka ndị nwere ike ịme nri lingonberry na-enweghị isi nri.
Lingonberry - 2 n'arọ.
Sugar - 0.5-2 n'arọ (dabere na ị na-achọ ezigbo ụtọ ma ọ bụ ihe na-egbuke egbuke).
Iji malite, cranberries kwesịrị ịhọrọ ma kpochaa nke ọma, ikwe ka mmiri kpoo (ị nwere ike ihicha mkpụrụ na akwa ma ọ bụ akwa akwa nke na-etinye mmiri mmiri nke ọma). Mgbe ahụ, ihe dị ọcha ma dị elu dị mkpa ka a gafere site na anụ grinder ma gbakwunye shuga a tụrụ atụ, na-agwakọta ruo mgbe e guzobere ikuku dị iche iche na kristal ahụ kpam kpam.
Ọ dị mkpa! Ihe kacha mma nke beri puree na shuga bụ ratio 1: 1, ma dabere na mmasị onwe onye, ​​ego ya nwere ike ịdị iche.
Ogologo oge a na-etinye jam na-abịa n'ọdịnihu, shuga na-agbanyekwa na ya, ị nwere ike ịmalite ịkwadebe ite na ikpuchi mkpuchi plastic maka ha (maka ịmịnye nwa, a na-esi nri ma ọ bụ tinye ya na oven). Akwụsịchara jam (n'eziokwu, ọ bụ nanị ala lingonberries na shuga) na-agbanye n'ime ite ma zigara na ngwa nju oyi, ọ bụ ezie na ị nwere ike itinye ngwakọta ahụ n'ime ihe ndị nwere plastik pụrụ iche ma kpoo.
Mee ụtọ jam si quince, Manchurian ukpa, nwa currant, strawberry, na-acha ọcha udara, goozberị, uhie currant na ọhịa strawberry.
A na-elekarị nhọrọ a nke ịme jam maka oge oyi ka ọ bụrụ ihe kachasị, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla ị na-akwadebe maka billet maka. N'oge a, tụlee usoro nke isi nri dị iche iche.
Sugar - 1050 g.
Edere ya, kpochapu ya ma saa ya na mmiri na-esi na wateron, na-ahapụ na steeti a ruo nkeji ole na ole. Mgbe ahụ, a na-ebufe tomato na nnukwu efere nke a na-ejikọta ya na mmiri dị ala, nke a gwakọtara na shuga na n'ígwé. N'ihe dị ka otu awa gachara, mkpụrụ osisi ahụ ga-amalite ihe ọṅụṅụ ahụ, a ga-etinye ha na ọkụ ọkụ maka nri ụtụtụ maka nkeji ise. A na-awụnye jam na-agwụ n'ime akpa ma mechie ya na ụzọ mbụ.
Nri mmanya si jam.
Ngwakọta nke lingonberries na shuga dị mma, ma e nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ dị oke mma maka ime jam, dịka ọmụmaatụ, tinyere apụl.
Apụl - 1100
Sugar - 1100
Mmiri - 160 ml.
Mgbe anyị gafesịrị, saa anyị na nke a na-ehicha ma ọ bụ nke ọma anyị na-ewepụta ma na-aga ịkwadebe apụl. Dị ka tomato, anyị na-asa ha na mbụ, mgbe ahụ, anyị na-ehichapụ ọka ndị ahụ, wepụ akpụkpọ ahụ, wepụ isi na ọnọdụ ahụ n'ime obere iberibe. Ozugbo a kwadebere mkpụrụ osisi ahụ kwesịrị ekwesị, oge eruola ka ị gaa n'ihu nkwadebe nke sirop, nke ị ga-eji wụnye mmiri a tụrụ atụ n'ime arịa ahụ a na-enye aka ma tinye shuga na ya. Ọ ga-abụ na a na-emegharị sirop mgbe niile, ọ bụrụ na ọ bụrụ na mmiri a ezughị ezu, ị nwere ike ịwụnye ntakịrị ihe). N'ọzọ ọzọ, a ga-akwaga apụl apụl, tinyere mkpụrụ nke lingonberries, na snoo a kwadebere ma sie maka otu minit n'elu obere okpomọkụ. Ngwakọta a gwakọtara kwesịrị ịdị jụụ (awa 3 ga-ezuru), mgbe ahụ, ọ na-ewe iwe ọkụ ọzọ ka ọ bụrụ obụpde, ọzọ ka o kwere ka ọ nyekwuo oge 2.5 ọzọ. Mgbe oge ezighi ezi nke abụọ gasịrị, a ga-etinye ya na jam nke lingonberry-apple ruo mgbe ọ ga-eru oke ala, na-ewepụ ụfụfụ na-ebuli elu. Ihe e mechara agwụ ga-abụ nke na-ahụ anya na obere ihe mgbu, mgbe nke a gasịrị, ọ nwere ike ịbanye n'ime ite ndị na-adịghị ahụkebe ma tụgharịa.
Ọ dị mkpa! Ihe kacha baa uru ga-abụ apụl, rie ya na akpụkpọ ahụ, n'ihi na ozugbo ahụ, ọ nwere ihe niile dị mkpa maka anyị. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-enwe ike ime ka ahụ gị dịkwuo ukwuu site na ụba nke eriri nke bara uru na ya, si otú ahụ meziwanye usoro nsị.
Nhọrọ dị mma na lingonberry-apụl jam ga-abụ okwu okwu ya na-emepụta mkpụrụ osisi figonberry-ya, bụ nke dị mma site na njirimara ya na ọ bụghị obere mmanụ bara uru.
Sugar - 510 g.
Lemọn - 65 g.
Mmiri - 310 ml.
Lemon ihe ọṅụṅụ - 1 tbsp. l
N'okwu a, usoro ịme jam adịghị amalite na lingonberries, kama ọ bụ na pears, nke, mgbe a sachachara, dị mkpa ka a kpoo ya na, n'ozuzu ya, jupụta na mmiri. Mgbe ahụ, mee ka mmiri lemon richaa, gwakọta ihe ọṅụṅụ ahụ. E kwesịrị ịsacha mkpụrụ tomato Lingonberry n'okpuru mmiri na-agba ọsọ, ma, tinyere nke fọdụrụ na pear anụ ahụ na lemon zest, tinye ya na pan, tinye mmiri 310 ml. Anyị na-esi na nchịkọta a kwadebere na obere okpomọkụ maka nkeji iri abụọ na abụọ, wee kpochapụ ya site na sieve n'ime akpa maka mmiri sie. A na-egbutu pears, bụ ndị gbasiri ike ugbu a, ka ọ bụrụ ihe dị n'ime efere ma tinye ya na tebụl na-edozi (a ghaghị iwepu ya). Wunye sugar n'otu efere ahụ, nke mere na mgbe ejikọsịrị, ị nwere ike ịbụ ya niile maka minit 40 ma wụsa ya n'ime ite. Njikere jam tụgharịa ụzọ dị mma.
Ọ bụrụ na nchikota mkpụrụ osisi na tomato n'oge nchebe bụ ihe a ma ama karịa anyị, mgbe ahụ, iji ugu na lingonberries eme ihe na-akpata nhụjuanya. Ọ bụrụ na ị na-eme jam dị ka ụzọ nchịkọta nke a, mgbe ahụ site na ahụmahụ nke gị jide n'aka na ọ bụghị naanị tọrọ ụtọ, kamakwa ọ bara uru.
Lingonberry - 1 n'arọ.
Ugu - 0,5 n'arọ.
Nri - afọ 2
Lingonberry ga-ebu ụzọ buru ụzọ, kpochaa ma ghaa ya ntakịrị, ikwe ka mmiri kpoo. Mgbe ahụ, a ghaghị ịmata tomato n'ime ite maka esi ma ziga ya na obere ọkụ maka ọkara elekere, na-eme ka jam dị n'ihu. Mgbe a na-ejikọta lingonberries na sugar, gbanye ugu ahụ, gbutu ya n'ime obere iberibe ma tinye ya na lingonberries tinyere pawuda na cloves. A gwakọtara ihe ndị a na-eme ka a kpoo ya ruo mgbe ugu dị nro, nke na-ekpebi nkwụsị nke jam ahụ, bụ nke a na-etinye na njedebe n'ime mkpọ ma tụgharịa.
Ntugharị mbụ, nke a na-enwe mmasị maka citrus ahụ a nụchara anụcha na-edekọ na jam dị ụtọ. Dị ka mgbakwunye na lingonberries, ị nwere ike iji lemon, oroma, ma ọ bụ ọbụna tangerine, ma dabere na nyochaa, nhọrọ kachasị mma ga-abụ lingonberry-orange jam, usoro nhazi nke a dị n'okpuru ebe a.
Lingonberry - iko abụọ.
Oranges - 2-4 (dabere na nha).
Sugar - 1.5 iko.
Usoro nke ịmepụta lingonberry-orange jam amalite na usoro nhazi nke nhazi na ihicha tomato, mgbe nke a gasịrị, a ga-ewepụta ihe dị mma ma dị ọcha n'ime akpa dị iche iche ma kwadebe maka mkpụrụ osisi citrus. A na-ekpuchi oranges ma bee n'ime obere iberibe, wee tinye ha na cranberries. A ga-eziga ite ahụ na ihe ndị a kapịrị ọnụ na stovu ma wetara ya obụpịa, mgbe nke a gasịrị ị nwere ike itinye sugar (mgbe ihe dị ka nkeji iri).
Ọ dị mkpa! Ezi gourmets nwere ike ịgbakwunye pawuda ọzọ, maka ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa ọ ga - ekwe omume iji karịa 3 spoons.
Mgbe ha ji nlezianya na-agwakọta ihe niile a na-emepụta, ha na-ahapụ ha ka ha ghara ịda mbà n'obi maka minit 10 ọzọ, na-agwakarị lingonberries na nnukwu ngaji. Mgbe oge a kapịrị ọnụ, ọ na-anọgide na-ewepụ jam, ma mgbe ọ dị jụụ ruo ebe okpomọkụ, gbanye n'ime mmiri.
Lingonberry jikọtara ya nke ọma na -acha ihe ọkụkụ, na iji nweta ahụ ike na ahụ ike, ọ dịghịdị mkpa ịchọrọ ya ka ọ gbakwunye ya. Tụlee otu n'ime ntụziaka ndị a maka nkwadebe ya.
Waraberry tomato - 1 n'arọ.
Sugar - 0,5 n'arọ.
Nri - 3 iberibe.
Cinnamon - 1 mkpisi.
Mmiri - 100 ml.
N'ịkwadebe lingonberries (egosipụ, saa na nke a mịrị amị), ọ ga-ejupụta na mmiri esi mmiri maka sekọnd ole na ole ma wụba n'ime colander, na-echere ka mmiri ahụ kwụsị. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ebute tomato na pan ma jiri mmiri na sugar tinye ya na ha, nke mere na mgbe ha jikọchara nke ọma, a ga-ezigara ha ọkụ. Ka ị na-eme ka ngwakọta ahụ, na-eche ruo mgbe ọ na-etu, gbakwunye ihe niile dị n'elu. Na steeti a, lingonberries kwesịrị igbanye n'elu obere okpomọkụ, na-akpali jam n'ọdịnihu maka minit ise. Mgbe oge a kapịrị ọnụ, ị nwere ike gbanyụọ stovu ahụ, mgbe jam ahụ ka na-ekpo ọkụ, wụsa ya n'ime ite ite.
Ọ bụrụ na ị hụlarị tomato tomato, mgbe ahụ, ị ​​maara banyere obi ilu nke dị n'ime ha, nke nwere ike ịkụda nsị ikpeazụ nke billet gị. Ọ bụ ya mere, iji mee ka àgwà ọma nke lingonberry jam dịkwuo mma, a na-edepụta mkpụrụ osisi na mmiri na-esi na mmiri esi mmiri, ma ọ bụ na-atụgharị ya.
Gụkwa otú e si eto olonberries na dacha, na otu esi kwadebe ya maka oyi.
Lingonberry n'onwe ya nwere ike ịbụ ezigbo ihe ndabere maka ime jam n'enweghị ihe mgbakwunye ọ bụla, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ntakịrị, ị nwere ike itinye ọ bụghị nanị citrus mkpụrụ osisi tomato (ha ga-atụkwasị piquancy na ịdị nwayọọ), kamakwa ụfọdụ ndị ọzọ abụghị ihe ndị nkịtị:
Green pine cones (nke a wụsara na mmiri ma tinye ya ruo ụbọchị 1.5, na mgbe ihe dị ka minit 10 na shuga na mmiri tinye ha na cranberries). Mgbochi a ga-enwe ọdịdị pụrụ iche na otu ekpomeekpo ahụ.
Rhubarb. Dịka mkpụrụ osisi citrus, ngwaahịa a ji obi ụtọ na-atọ ụtọ, mgbe ị na-eche na lingonberries n'onwe ya enweghị ụdị a, mgbe ahụ ị ga-agbakwunye shuga dị mma. Rhubarb enwewo ihe ịga nke ọma na-eme ka jam, n'ihi na ọ nwere ike idebe ọdịdị ya nke ọma ma nye efere a kwụrụ agwụ ka ọ bụrụ ihe na-atọ ọchị.
Cranberries na blueberries - ezigbo ndị enyi nke tomato a kọwara, nke ya na ya mepụtara ihe dị egwu vitamin. Ọbụna 1 teaspoon nke jam dị otú a ga-enwe mmetụta dị mma na steeti ahụ n'oge oge nje ọrịa na-ebute n'oge, na-enyere aka ọ bụghị nanị iji gbochie mmepe ha, kamakwa iji merie ọrịa ahụ.
A na-ejikarị tii na-emepụta lingonberry jam, mana n'otu oge ahụ ọ na-aga nke ọma na ọtụtụ pastries ma ọ bụ ọbụna ndị nkịtị e ghere eghe pancakes. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịmepụta mpịakọta ma ọ bụ nri achịcha, yana tinye ya na vitamin mmanya vitamin. Otu n'ime ụzọ ndị dị iche iche a ga-esi jiri ọgwụ ahụ mee bụ ịkwado ya ma ọ bụ efere anụ, ọ bụ ezie na nke a, jam kwesịrị ịdị ụtọ ma na-egbuke egbuke.
Mụta banyere nsogbu nke nhazi gooseberry, yoshta, blueberry, kranberị, black chokeberry, cornel, na viburnum maka oyi.
N'agbanyeghị otu ị ga - esi kpebie iri nri lingonberry, ọ bụrụ na ị ga - emeri, ọ bụ naanị na ị ga - enwe mmeri, ọ bụ na ị ga - enweta otu vitamin bara uru. Ọ bụ naanị ihe dị mkpa iji kwadebe ụdị mpempe dị otú ahụ nke ọma.